Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 44
Mandry ve ny ao an-tanàna?
Par Taratra sur 14/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahay tokoa ity fitondrana ity raha hamono afo. Raha saika hampiakatra saran-dalana ny mpitatitra eto an-drenivohitra, nidina tampoka ny vidin-tsolika. Nampiaka-peo ny mpanjifa ho an’izay mpitatitra nikiry hampandoa 500 Ar. Ny mahagaga, raha nahatratra 150 dolara ny iray fatra (baril) tamin’ny solika, lasa nanodidina ny 30 dolara izany taty aoriana, tsy nisy fiantraikany tamin’ny tsena […]
Misy raha la terre…
Par Taratra sur 13/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Niniana natao, ho fanomezam-boninahitra ny mpanatontosa ny lohatenin’ny « Indraim-bava » anio. « Misy raha la terre », fandaharana manokana, naka endrika fanadihadiana nahafantaran’ny maro an’Ikotoniaina, izay nodimandry omaly. Nahafantaran’ny Malagasy tantara maro momba an’i Madagasikara, firenena nipoirany ihany koa izany. « Tena misy raha tokoa la terre », hoy ny fisenton’izay avy nanaraka ny fanadihadiana nataon’Ikotoniaina. Firy tokoa moa ny […]
Fanenjehana mpanohitra… fiampangana tena
Par Taratra sur 11/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy ny fifanenjehana, hono, no hampandrosoana ny firenena. Kabary mievotrevotry ny sasany io. Ny vy, tsy mikitrana irery. Iza no manenjika an’iza amin’ity hoe fifanenjehana? Samy manenjika na ny mpitondra na ny mpanohitra. Lany andro manenjika mpanohitra ny mpitondra? Na ny asa no hoe andresen-dahatra izay manenjika, manohitra… Tsy maharesy lahatra izay asa vita, ihazakazahana […]
Mamono lolo, mamono afo, mamono…
Par Taratra sur 10/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mampitahotra mialoha mba tsy hahavaky betroka ny ratsy (h)atao ny mamono lolo na manao vono lolo. Amin’izao, fisehoana ho zavatra na fanitsahana aloka… Tsy izany no vita sy hita amin’izao? Teo ny fampanantenana an’itsy sy iroa. Eo ny vahoaka ifotony mitsara amin’izay fiovam-piainana noho ny vono lolo: ahoana, ohatra, ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, […]
Ndao haka lesona
Par Taratra sur 07/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Nampahafantarina tamin’ity herinandro ity ny fandaharanasan’ny fanjakana tohanan’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana Pnud, hanatsarana ny fanabeazana, « Ndao hianatra ». Fototry ny maha olom-banona hahatonga firenena vanona tokoa ny fanabeazana, avy amin’ny lesona ampianarina. Raha raisina ireo, inona tokoa no tsy hakana lesona avy amin’ny teo aloha ? Samy manana ny paikady hitantanany firenena ny mpitondra samihafa mifandimby, tonga […]
I Dada ihany no Neny ?
Par Taratra sur 06/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
“Père et maire”, araka ilay lohatenin’ny andian-tsarimihetsika frantsay iray. Tsy miteny akory hoe sarimihetsika no misy, fa na izany aza, maro kosa ireo liana sy nitolagaga raha nanaraka ny vaovao mahakasika ny vadin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, tato ho ato. Hain’ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc tokoa ny manamarika ny zavatra hataony. Tsy hiadian-kevitra iny fa na […]
Ho ngazana ny tanindrazana !
Par Taratra sur 05/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena izy fa tsy sangisangim-pitenenana intsony ! Ny ala atsinanana, madiva ho ringana. Ny faritra atsimon’ny Nosy, anan’ny tsy fisian-drano. Loadoaky ny fitrandrahana ireo harena anaty tany samy hafa. Manomboka ihany koa ny eto an-kibon’Imerina. Zary ifandrotehan’ny tompony amin’ny vahiny ilay vohitra manan-tantaran’i Soamahamanina. Lafiny toekarena sy fihariana ireo, fa ngazana tahaka izany koa ny tontolon’ny […]
Fositra… tsy vitan’ny tari-dositra
Par Taratra sur 04/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Inona no tena fositra amin’izao raharaham-pirenena izao? Efa samy nanaitra tamin’ny fampiakaram-peo ny firaisamonina sivily, ny mpanao politika, ny fiangonana… Manjaka ny tsy fanarahan-dalàna afitsoky ny mpitondra, gaboraraka ny harem-pirenena sy ny fivarotan-tanindrazana, mihanaka ny kolikoly, mahazo vahana ny tsy fandriampahalemana sy ny fitsaram-bahoaka… Amin’izany, tsy mila porofo fa mihamahantra ny vahoaka. Inona no (h)atao […]
Izay madio no afa-kanadio…
Par Taratra sur 03/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fanasana atidoha izao, fanamarinan-tena, fampielezan-kevitra politika… Ny vava toy ny vorodamba: mitriatra atsy, mitriatra aroa. Fitiavan-tanindrazana, fitadiavana fitoniana, famelana ny vahoaka hamokatra, fandresen-dahatra amin’ny asa… Mby aiza? Matoa tenenin-dava, tsy misy na tsy ampy. Kapakapa vorombe sima: mba mijery tena vao manetry olona. Ny lainga toy ny salaka, ny tompony ihany no afatony: soa atao, […]